Umlando / Amasiko - Noelson Chemicals Technology Co., Ltd.
UNoelson Chemicals (Nanjing) Co, Ltd. noNoelson Micro-powder Industry Inc. bane-ekuzinzile, ikakhulukazi kocwaningo, ukuthuthukiswa nokwenziwa kweMicaceous Iron 0xide, Magnetic Iron 0xide ne-Natural Iron 0xide.
Kusuka ku-2000 kuya ku-2005
ikakhulu benza ucwaningo nentuthuko ochungechungeni lwe-antirust pigment, imvelo entsha enobungako ye-antirust pigment kanye nokugcwaliswa okusebenzayo.
Sethula ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bamakhemikhali nolwazi oluvela eNyakatho-ntshonalanga Melika yaseMelika, siphumelele ekwakheni uhla lomkhiqizo we-Superfine Ferro-Phosphorus Powder, futhi le mikhiqizo ithuthukisiwe futhi yamukelwa emakethe. Njengamanje, siba ngabakhiqizi abakhulu bokunikeza abaPhuzi abaPhezulu beFerro-Phosphorus eChina.
Siziphonsa ocwaningweni nasekuthuthukisweni kweZinc Phosphate, Aluminium Tripolyphosphate, nePhosphate Rust emelana nezingulube, imikhiqizo yethu emisha yokukhuthaza ehlangabezana ngokuphelele nemvelo ebaluliwe yezinga lomhlaba jikelele. Njengamanje, singomunye wabakhiqizi nabahlinzeki abahamba phambili esifundeni sase-Asia-Pacific nemikhiqizo ethunyelwa kuwo wonke umhlaba.
Inhlanganisela yokungenisa nokudala, sithuthukisa ngokulandelana uchungechunge lwe-Compound Ferro titanium, i-Compound Red Lead, i-Compound Antirust Pigment ne-Super Rust Powder. Kunobuchwepheshe obuthuthukisiwe obuningi, ukulawulwa kwekhwalithi eqinile, okuqinisekisa ukuthi singumholi embonini. Umkhiqizo wethu we-Compound Ferro-Titanium Powder osuvele waziwa kabanzi emakethe, uthola isabelo esikhulu semakethe embonini.
INoelson Chemicals (Shanghai) Co, Ltd. yasungulwa, ikakhulu ibandakanyeka ekuthuthukiseni umkhiqizo omusha nokumaketha, ukuthengisa nokusebenza kwehhovisi elikhulu eChina.
Siqala ukuthuthukisa nokukhiqiza uchungechunge lwe-Glass Flake, i-Glass Fibre, i-Glass Microsphere ne-Vitreous Microsphere, i-refrence ubuchwepheshe obuseqophelweni nokwakhiwa kwamakhemikhali okuvela eJapan, eBrithani nase-USA, singumkhiqizi wokuqala ukuthuthukisa yonke imikhiqizo yesizukulwane esisha ukuhlangabezana Izidingo zemakethe yasekhaya naphesheya kwezilwandle, kanye nobuchwepheshe bomkhiqizo wethu wengilazi we-glass flake ongafinyeleleka kusitifiketi somkhiqizo onophawu lomhlaba jikelele.
UNoelson Chemicals ushicilele ubunikazi obuningi kanye nomqondo kulo magazini. Njengo (Superfine ferrophosphorus powder application, development and research), (The latest conductive powder application technology and prospective research report) uchungechunge lwezihloko zobungcweti, ezishicilelwe komagazini bamazwe omhlaba, ezizuzela imboni.
Sithuthukise uchungechunge olusha lwezinto zokuhambisa nezokulwa, ezifana ne-High-grade Conductive Carbon Powder, i-Conductive Zinc oxide, i-Conductive Polyaniline, i-Conductive Carbon Nonotubes, njll. Silwela ukuba ngumakhi oholayo esifundeni saseChina kungakapheli iminyaka emihlanu sinikezela ngokuhambisa imikhiqizo.
Ingxenye yemikhiqizo yethu ithola“Finyelela isitifiketi esivela eYurophu, futhi uNoelson uyasithola Isitifiketi se-IS09001 / 2008.
Ukuqedwa kwesitshalo esisha eShanghai Nanhui.
Isitshalo esisha sokukhiqiza somkhiqizo womkhiqizo we-phosphate saqedwa.
sizokwenza ukusheshisa emisha yethu nentuthuko, sizame ngokwethu ukuba abe nomkhiqizi ehamba phambili abahle powder, umsebenzi sombala futhi izinto conductive maphakathi nezwe China esifundeni Asia-Pacific.